चलचित्र क्षेत्र छाड अनमोल, तिम्रो काम छैन… - Entertainment Khabar
चलचित्र क्षेत्र छाड अनमोल, तिम्रो काम छैन…
प्रकाशित मिति: मंगलबार, आषाढ १६, २०७७ समय: ६:०२:४२
नेपाली सिनेमा क्षेत्रमा दायाँबायाँ केही नभनिकन आँखै चिम्लेर चालिस वर्ष जसले बितायो, र अझै त्यही क्षेत्रलाई कसरी योगदान दिने भन्दै लागिपरिरहेको छ, यस्ता सिने हस्ती हुन् भुवन केसी । अनि, यिनै भुवनका छोरा हुन् अहिलेका सुपर स्टार अनमोल केसी ।
आफ्ना बाबुको बिँडो थाम्दै नेपाली सिने क्षेत्रमा चम्किरहेका अनमोललाई केही सल्लाह दिनैपर्ने देखियो, त्यसैले यी पङ्क्ति लेखियो ।
अनमोल ! तिमी नेपाली चलचित्र छाड, किनकि तिमी भुवन केसीका छोरा हौ । तिमी त डाक्टर, इन्जीनियर, पाइलट या अन्य पेशामा पो लाग्नु पर्दथ्यो, कहाँ चलचित्र क्षेत्रमा अरूको भाग खोस्न आएको ? किनकि तिमी भुवन केसीको छोरा हौ, र यो नै तिम्रो गल्ती थियो । भुवन केसीको छोरा नभएको भए कहाँ तिमी हिरो बन्न सक्दथ्यौ र ? तिम्रो बारेमा यस्तै चर्चा छ आजकल बजारमा ।
तिमीले खेलेको फिल्म हिट भए । तिमीलाई दर्शकहरूले साथ दिए, माया गरे, अर्थात् तिमी आफ्नै प्रतिभाको बलमा उभियो । यो पनि तिम्रो गल्ती थियो । त्यसैले फिल्म लाइन तिमीले छोड्नै पर्छ । तिमी नआएको भए सीमित केही अनुहार र उपस्थितिमा रमाइरहेको नेपाली सिनेमाको बजार त्यत्तिमै सीमित रहिरहन्थ्यो । तिमी आएका कारण युवा पुस्ताका लाखौँ दर्शकहरूलाई तिमीले हलमा तान्यौ । यो पनि तिम्रो गल्ती थियो । वास्तवमै तिम्रो आगमनसँगै युवा पुस्तामा नेपाली सिनेमाप्रति क्रेज बढ्न थाल्यो । यस्तो गर्न नहुने तिमीले, यो गल्तीको लागि तिमीले क्षमा माग्नै पर्छ ।
भुवन केसीको छोरो नभएको भए अनमोल हिरो हुँदैनथ्यो भनेर भन्ने कलाकारहरूसँग तिमीले उल्टै माफी माग्नै पर्छ । अनमोल तिमी नआएको भए अरू धेरैले अवसर पाउँथे, उनीहरुको भाग तिमीले खोस्यौ । यसो गर्नु तिम्रो महापाप हो । तिमी राम्रो फिल्म दिने, बजारमा आफ्नो क्रेज बढाएर गलतमाथि गलत गर्दै जाने ? यो छुट कसले दियो अनमोल तिमीलाई ? अरू कलाकार काम नपाएर डिप्रेसनमा गैराख्दा तिमीचाहिँ फिल्ममा ब्यस्त भैरहने ? पारिश्रमिक पनि अरूको भन्दा बढि लिने ? कलाक्षेत्रमा भएर पनि जीवनस्तर पनि अरूको भन्दा फरक र उच्च बनाउने ? यसो गर्दा अरूको मन पोल्दैन त ? यस्तो काम गर्न छाड है अब ।
नेपालदेखि प्रबाससम्म रहनुहुने नेपालीहरूमाझ तिम्रो क्रेज र वाहवाही गजबकै छ । कोही थानकोट काटेर जान नपाउने अनि तिमीचाहिँ यही सानो उमेरमा विश्व घुम्ने ? अरूलाई डाह, इर्ष्या, लोभ र लालच लाग्दैन त ? खै कुरा बुझेको ? त्यसैले तिमीले सिनेमा क्षेत्र त्याग्नै पर्छ । अरू युवा पुस्ताका केही महिला वा पुरूष कलाकारहरू जस्तो तिमी चिया पसल र समूहतिर भेटिँदैनौँ । अरूको कुरा काटेर बस्ने सोच, काम र समूह तिम्रो छैन । तिमी मिडियामा पनि धेरै बोल्दैनौ र अरूलाई गाली गरेर चर्चामा आउने लोभ पनि तिमीलाई छैन । यसो अरूको कुरा काट्नु, चोकतिर चिया र चुरोट पिएर बरालिनु पर्छ नि ? कति अध्ययन र खोजमै ब्यस्त भैरहेको ? यो पनि तिम्रो गल्ती हो । बागबजार, अनामनगर, डिल्लीबजार चोकतिर आएर यसो केटाहरूसँग बसेर चिया खानु र उनीहरूले खाएको पैसा तिरेर गए पो सबैले मान्छन तिमीलाई । यस्तो आइडिया र बुद्धि नै छैन तिमीसँग । अनि किन गाली गर्दैनन् त अरूहरूले तिमीलाई ।
त्यसैले, अबदेखिआफ्नो क्रेज बढाउने काम नगर्नु । हिट फिल्म नदिनु । नेपालदेखि विदेशसम्म आफ्नो बर्चश्व नबढाउनु । वर्षमा एक वा दुई मात्र होइन, १२-१३ वटा फिल्म खेल्नु । अफर आएजति सबै खेल्नु, न कथा चेक गर्नु न त युनिट नै हेर्नु ? आएको बात छैन भन्दै अफर आएका सबै फिल्म खेल्नु । सबैभन्दा ठूलो गल्ती त तिमी भुवन केसीको छोरो हुनु नै हो । यो गल्तीको लागि तिमीले धेरै मूल्य चुकाउनु पर्छ । नाम, दाम, क्रेज र वाहवाही कमाएर मात्र पुगेन तिमीलाई ? त्यसमाथि सबैको प्रिय बन्नु पनि तिम्रो गल्ती हो । त्यसकारण, चलचित्र क्षेत्र छाड अनमोल, तिम्रो काम छैन… ।
काठमाडौँ उपत्यका कोरोना सङ्क्रमणको दृष्टिबाट अति उच्च जोखिममा परेको छ । सोमबार मात्र देशभरका कुल १८० जना सङ्क्रमितमध्ये ...
काठमाडौँ। अहिलेको संविधानमा संसद बिघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन गर्ने व्यवस्था नै छैन । विगतमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद भङ्ग ...
खान अयोग्य चिनी योग्य बनाएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई कारबाही गर्नुको साटो जोगाउने चलखेल सुरु भएको छ। कृ...